Real Madrid oo wada qorsho ay kula soo saxiixaneyso xiddig ka tirsan Bayern Munich – Gool FM
(Madrid) 17 Dis 2021. Wargeysyada Spain ayaa sheegay in maamulka Real Madrid ay aad u xiiseynayaan inay la saxiixdaan laacibka reer France iyo kooxda Bayern Munich ee Kingsley Coman, inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga.
Kingsley Coman waxaa loo arkaa mid ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan Yurub ee ka ciyaara dhanka weerarka garabka, waxaana hubaal ah inuu wax weyn ku kordhin doono Los Blancos haddii uu ku biiro xilliyada soo socda.
Shabakadda “Fichajes” ee dalka Spain ayaa muujisay inay Real Madrid isha ku heyso heerka uu marayo heshiiska Kingsley Coman ee Bayern Munich, si ay ula xaajooto isaga iyo kooxdiisa xagaaga.
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in qandaraaska Kingsley Coman ee kooxda Bayern Munich uu ku egyahay xagaaga 2023, inkastoo qandaraaska ciyaaryahanka uu sii dhamaanayo, hadana waxaa joogsaday wadahadaladii dib u cusbooneysiinta heshiiska ee kooxda, sidaas darteed Real Madrid ayaa ka faa’ideysan doonta. xaalada, waxayna kala hadli doontaa ciyaaryahanka inuu ku biiro Los Blancos xagaaga.
Shabakadda ayaa tilmaamtay in Real Madrid ay heshiis la gaartay xiddiga reer France iyo kooxda Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe, waxayna sidoo kale xiiseyneysaa inay la soo saxiixato Coman, kaasoo ku fiican inuu ka ciyaaro dhammaan boosaska weerarka.
Waxaa xusid mudan in Kingsley Coman uu shan gool u dhaliyay kooxdiisa Bayern Munich xilli ciyaareedkan, wuxuuna sidoo kale ka caawiyay laba gool saaxiibadiis.